G - मेल - Saturdayकलम | Kavyalaya - काव्यालय
G - मेल | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
by युवराज March 7, 2020
अफिस छुट्टीको दिन छ । मनमा कुरा खेलिरहन्छन् । डेरामा बसिरहन मात्र पनि मन लाग्दैन् । फेसबुक अकाउन्ट ब्लक भएपछि मनमा एक किसिमको छट्पटी अनुभूत गरिरहेको छु । एकाउन्ट पुनः फर्किन्छ कि भन्ने आश पनि छ । खैर बिफल नै भए पनि केही छैन । एकाउन्ट बनाउन भन्दा पनि साथी बनाउन झन्झट हुन्छ । अझ अप्ठ्यारो त मनपरेका लेखक, राजनितिज्ञहरुलार्ई ‘प्लिज एसेप्ट गर्नु न ’ भन्ने हुन्छ ।
अस्ति भर्खर एउटीलाई जालमा पारेको थिएँ । कम्ता लागेको थियो र पट्याउनलाई ? दुइचार ओटा फिल्मी डायलग हान्नु परेको थियो । दुइचारओटा उपन्यासका भावुक डायलग हान्नु परेको थियो । अन्तिमका उपन्यासका डायलग चाहिँ कहाँ सुनेको कहाँ सुनेको, भनेपछि कुराको बिट मार्दै ढिच्च दाँत देखाएको स्माइली छाड्दै बाहिर निस्केको थिएँ । साच्ची ! ती युवतीले के भनेर पठाई होली ?
हिँउदका दिन मौसम यस्तै हुन्छ । बिहान जाडो ह्वात्तै बढ्छ । दिउँसो अलिकता घाम रापिला र बेलुकीपख फेरी उही जाडो । बाटामा मानिसहरु आगो बाली तापिरहेका छन् । कोही भने परैबाट आगोमा हात सेकाउँदै आफ्नो गालामा टाँस्दै थिए । म भने ज्याकेटका गोजीका हात घुसारेर कफि सप तिर जादैछु । परैबाट हेर्दा, कफि सपमा धेरै मान्छेहरू छन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । सधाझैँ म बस्ने टेबलमा कसले हो तातो कफीको बाफ उडाइरहेको थियो । मान्छे भने कतै देखिएन । सोचेँ , ‘कतै गएको होला ।’
मोबाइलमा घन्टी बज्यो, “यो सम्झिने मन छ म बिर्सु कसोरी…”
नारायण गोपालको स्वर भरेको थिएँ रिङटोनमा । सरोजले फोन गरेको रहेछ । काटीदिएँ । आखिर मोरोले फेसबुकमा अनलाइन नभेटेपछि केही आपत्ति परेर फोन गरेको हुनुपर्छ । सधैं एउटै काम त हुन्छ नि, इस्टाटस भनिदिनु पर्ने ! अर्थात ऊ कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, मैले त्यही वातावरणका बारेमा लेखिदिनु पर्ने । जस्तो कि आज ऊ कसैको प्रेममा छ, मैले मिलनका बारेमा केही लेखेर पठाउन पर्ने । ऊ र ममा कति भिन्नता छ । ऊ युवती फकाउन इस्टाटस लेख्छ । म इस्टाटस लेख्न युवतीहरु फकाउने प्रयत्न गर्छु ।
ऊ अहिले कुनै नामी संस्थामा काम गर्छ । महिना मरेको दिन भने हामी जमघट गर्छौं । उसलाई किताब पढ्न भनेपछि एलर्जी नै छ । तर प्रेम सम्बन्धी भेट्यो भने चाहिँ, सबैभन्दा अघि उसैले पढेको हुन्छ । मिलन र बिछोडका डायलग मुखाग्र पारेको हुन्छ ।
अस्ति भन्दै थियो, “एउटीलाई समर लभको डायलग मारेको थिए, सिधै अगाँलोमा बेरिई, छाड्दै छाडिन् ।”
मैले हाँदै भनिदिएँ, “कुनै दिन उसले पनि समर लभ पढी भने सिधै रिजेक्ट !”
ऊ “नो वे !” भन्दै आफ्नो बाटो लागेको थियो ।
मैले थाहा पाएदेखि नै उसका प्रेमीकाहरु दुईतीन वटी छन् । थाहा नदिएका पनि त होलान् । महिनादिन अघि उसले उसकी नयाँ प्रेमीकासँगको नयाँ फोटो हालेको थियो । करिब सोह्र/सत्र बर्षकी देखिन्थिई ऊ । मैले कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिएको थिएँः
“बच्चाबच्चीलाई पनि छाडिन्स हैन ”
उसले तुरुन्तै म्यासेज बक्समा आएर “अलिक राम्रा कमेन्ट गर् ” भनेर हप्कायो । मैले फेरि तु कमेन्ट डिलिट गरेर लेखिदिए, “ भगवानले फुर्सदमा बनाइदिएको रहेछ !”
त्यतिबेला ऊ कमेन्ट हेरेर खित्का छाडेर हाँसिरहेको थियो, सायद ।
मेरो ठिक बायापट्टी एक नव दम्पति खित्का छाडेर हाँसिरहेका थिए । ‘सायद, म एक्लैलाई देखेर पो हो कि !’ ह्या छाडिदिउँ यी सब कुरा । मान्छेलाई हाँस्न कुनै कारण चाहिँदैन । मैले पनि त पढेको छु, “हाँस्न जान्नु पनि त एउटा कला हो ।” । सायद , त्यही कलाको प्रयोग पो गरिरहेका थिए उनीहरूले ।
जाडोले काँपेका हात रगेट्दै कफितिर ती हात बढाएँ । कफि चिसो हुन लागिरहेको रहेछ । तीन चार घुड्कीमै सुरुप्प पारेँ र कफि सपबाट बाहिर निस्केँ ।
मैले सधैं बस्ने गरेको टेबलको कफिबाट पुर्ववत अवस्थामा बाफ आइरहेको थियो ।
कोठामा पुगेर पहिला खाना बनाउन थालेँ । धनिया र टमाटर पिसेर चट्नी बनाएँ । आमाले गाँउबाट पठाउनुभएको थियो । मिठो बनाएछु । अलिकति आमाको, गाउँको माया मिसिएर पनि होला । एकछिन ल्यापटपमा बसेँ । मेल चेक नगरेको धेरै दिन भै’सकेको थियो । पहिला मेल नै चेक गरेँ ।
घरबेटीकी छोरी रै”छे । फोगटमा दुईतला माथि मेल गर्छे । आएर भने भै’गो नि । त्यसको बाउको कोठा भाडा तिरेकै छ क्यारे । बिनासित्ती निउ खोज्छे । जे होस् पछि कोही भेटिएन भनै त्यै मोरीलाई पट्याउन लाग्न पर्ला ।
अर्को मेलमा गएर आँखा टक्क अडिए । सन्सार गर्ल ६५६ बाट मेल आएको रहेछ । मेल प्राप्त भएको छ दिन बितिसक्दा पनि मेल नफर्किएकाले अर्को मेल पनि आएको रहेछ । मेल लामो रहेछ । छेउमा बसेर पढ्न थालेँ ।
खै के सम्बोधन गरुँ तपाईलाई ? माथिका सम्बोधनको उतराधिकारी हैन होला म । खैर, सम्बोधनको उतराधिकारी हुन्थेँ पनि हुँला तर ती सबै सम्पुर्ण कुरा गुमाइसकेँ । तपाईले लेख्नुभएका प्रायः पत्रहरु मसँग सुरक्षित नै छन् । तपाईले जीवन जिउन सिकाउनुभयो । हिड्न नजान्ने थिएँ । ठम्ठम्ती हिड्न जान्ने भएको छु । म सानो बालक झैं थिए तर बीच बाटोमा नै छाडेर तपाई कता अलप हुनुभयो ? म जान्दिनँ ।
मैले ती पुराना दिनहरुमा तपाईका उत्तर फर्काउने प्रयास गरिनँ । मेरो इच्छाभन्दा ठूलो समाज थियो । मलाई डर थियो समाजको । मैले केही सोच्न सकिरहेकी थिइनँ । वा भनौं, मेरो मस्तिष्क ठिक ठाउँमा थिएन । विवाहको १२औं दिनमा श्रीमान बित्नु, तपाईँका प्रेमिल पत्रहरु ती दिनमा पाउनु, मेरा लागि सौभाग्य र दुर्भाग्य दुबै थिए । समय पनि कति छिटो बित्छ है ? ऊ बितेको चार बर्ष भै’सकेछ । खै, कसले चलाउँछ यो समय भन्ने कुरा ? मिलनमा यही समय बिस्तारै कुद्छ । बिछोडमा यही समयको गति धिमा भै’दिन्छ । उफ्फ्, म ज्ञान, विज्ञानका कुरा केही पनि जान्दिनँ । तपाईले अन्तिम पत्रमा भनेका कुरा सम्झिरहन्छु “जिन्दगीको रथ एक पाङ्ग्राले कदापि चल्दैन, कुद्न दुई पाङ्ग्रा सक्रिय हुनैपर्छ !”
गेट चुइकक गर्यो । घरबेटीकी छोरी गेटनेर पुगेर हात हल्लाउदै रै’छे । प्राक्टीकल क्लास जान लागेकी होली । उसको ‘बाइ’ नफर्केपछि रिसले चुरमुरिदै बाहिर निस्की । घाम झ्यालमा आइसकेछ । म ल्यापटप लिएर भित्र छिरेँ । पहिला पहिला त यो मेल साथीहरुले नै पो ठेलेका हुन की भन्ने लाग्यो । धेरैपटक मलाई यसरी नै झुक्याइएको छ । एकचोटी के भयो भने –क्याल्स जान अल्छि लागेर ओछ्यानमा सुतिरहेको थिएँ । नयाँ नम्बरबाट फोन आयो । उठाएँ-
“हेलो… ” उताबाट अलिक मोटो आवज आयो । ऊ कड्किएको थियो । “तैंले मेरो बहिनीलाई के भनिस अरे ?”
मेरो होसोहवास नै उड्यो । मैले केही बुझिनँ । मेरो कसैलाई खराब नियतले जिस्काउने नियत थिएनँ । पुर्ववतभन्दा अलि काँपेको स्वरमा मैले भनेँ, “को बहिनी, मलाई थाहा नै छैन !”
उसले फोनबाट नै हानुँला जस्तो गर्यो । मेरा सम्पुर्ण पारिवारिक पृष्ठभुमि भन्यो । गल्ती कही कतै केही नभएपनि डर डर लागिरह्यो । हतार हतार फोन काटिदिएँ । मैले सम्झनै सकिरहेको थिइनँ । ‘को केटीलाई जिस्काएँ मैले ?’
भोलीपल्ट क्याम्पस पुग्दा कक्षाका सबै हाँसिरहेका थिए । सरोज भने बेन्चमा मुर्छा परेर लडीबडी नै गर्दै थियो । सबै ती मोराहरुको काम पो रहेछ ।
अहिले म घरमा बसेर ल्यापटप चलाइरहेको छु । मैले यस यन्त्रलाई चलाएको हुँ वा यस यन्त्रले मलाई चलाएर तपाई सामु पुर्याएको हो । म आफै कन्फ्युजमा छु । बिहानीको समय छ । हल्का रापिला घाम लागेर मौसमलाई न्यानो प्रदान गरिरहेको छ । मौसम र ममा यति फरक छ । मौसमलाई साथ दिन घाम लागिरहेको छ । तर मेरा लागि ? वसन्त रितुमा पनि शिशिर यामको अनुभव हुन्छ । अनौठा लाग्न थालेका छन् यी भुगोलहरु । पृथ्वीमा अवस्थित ताराहरु, घामहरु । घुमेर आउने वायुले पनि मलाई नछोइ गए जस्तो लाग्न थालेको छ । खै ! कसरी म यो जीवन बाँचिरहेको छु । आफैलाई थाहा छैन । यस्तो शब्द खोजिरहेको छु ,जुन शब्दहरुले मैले भोगेको सम्पुर्ण जीवन बताओस् । अचेल तपाईलाई सम्झिदा शरिरमा उर्जा थपिन्छन् । कुनै आश पलाएको जस्तो हुन्छ । जस्तो कि बजार गएका बाआमाले घर फर्कदा केही ल्याइदिने छन् । किन भइरहेका छन् यी सब कुरा ? म उत्तर भएर पनि अनुत्तरित छु ।
अन्तिममा , म तपाईको उत्तरको प्रतिक्षामा हुनेछु ।
उही तपाइकी अभागी
खुट्टा प्यारालाइसिस भए जस्तै भए । डेग चलेनन् । मानसनिपटल निस्क्रिय झैं भयो । दिमागले एकछिन केही सोच्न केही सकेन । त्यो हृदयबिदारक मेल पठाउने मेरै बालसखा सरला रै’छिन् । उसका बाबुले सानै उमेरमा डोली चढाइदिएपछि उसको र मेरो भेट भएकै थिएन । आफूभन्दा ३ गुणा उमेरको बुढासँग विवाह भएको थियो । विवाह भएको केही दिनमा नै उनको श्रीमानको मृत्यु भएको थियो । पछि मैले केही समवेदना पत्रहरु पनि कोरेको थिए । तत्काल कुनै मेल पठाउन मन लागेन । ल्यापटप सट डाउन गरे । दिमागभरि बाल्यकालिन स्मृतिहरु घुम्न थाले । एकाएक सरलालाई सम्झिन थालेँ ।
हामी गाउँभरिका केटाकेटी साझपख बाजो खेतमा खेल खेल्थ्यौं । राजु, शरण सरला र म प्राय एउटै टिममा पर्थ्यौं । अन्तिमा विपरीत टिमलाई हराइसकेपछि हरुवा, डरछेरुवा आदि इत्यादि भन्दै घरतर्फ लाग्थ्यौं । विपरीत समुहका साथीहरु भने, औंला ठड्याउदै ‘भोली पखेस है त’ भन्दै जान्थे । अहिले बाँचेको जीवनभन्दा कयौं गुणा रोमाञ्चक थियो त्यो बेला । सरलाको घर मेरो घरभन्दा तीन चार घर माथि थियो । उसका बालसुलभ क्रियाकलाप जो कोहीलाई मोहीत पार्ने खालका थिए ।
एकदिन उसले घरबाट रेडियो ल्याई । पुरानो थियो । नझपारी बज्दै नबज्ने । तीन चार पटक हातले ठोकेपछि मात्र बज्ने । हामी गित बजेपछि नाच्न सुरु गरिहाल्थ्यौं । मैले नाँच्न के सुरु गर्न लागेको हुन्थे, रेडियो बन्द भै’हाल्थ्यो । रिस उठेर, मैले लात्तीले दिएर एक कान्लामुनि पुर्याइदिएको थिएँ । चारओटा ब्याट्री कताकता पुगेका थिए । सरला हताहतार गएर अस्थिरपञ्जर भेला गर्न थालेकी थिई । रेडियोमा जोडाउन खोजी, मिलेन । ऊ सुक्क सुक्क गर्दै रुन थाली । माथिबाट उसका बा कराउन थाले, “माम खाना आइजा छिटो !”
सरलाका बा अलिकति छुद्र स्वभावका थिए । त्यस्तै थिए कि, मलाई त्यस्तो लागेको हो मलाई त्यति बिधि याद छैन । गाउँभरिका केटाकेटी उसका डरले काँप्थे । आखिर म पनि त्यहीँ गाउँको न थिएँ ।
घर कुदेर पुगे र, धानको भकारीमा पसेँ । आमाले खाना खान खोज्दा समेत निस्किनँ । सरलाले भनिछे क्यारे, पछि उसका बा हाम्रो घर आएर मलाई खोज्दै थिए । लु आज चै मरियो भन्ने भै’सकेको थियो । कानका लोती राताराता भैसकेका थिए । म श्वास दबाएर बसिरहेको थिए त्यहीँ भकारीमा ।
आमाले “बिहान देखी नै छैन” भनेपछि उनी आफ्नो बाटो लागे । भोक लागेर मर्न लागिसकेको थियो । छिटो छिटो निस्केर खाना खाए । बलेसीमा चुठ्न के पुगेको थिए,आमाले झपार्नु भो । म चुपचाप बसेँ । घोसेमुन्टो लगाएर केही नबोली भित्र पसेँ । नेपाली किताब निकालेर ठूलो ठूलो स्वरमा भट्याउँन थालेँ-
‘सियो खै सियो?
अहिले यही थियो…’
हामी समयसगै बढ्दै गयौं । जति नै झगडा गरे पनि आत्मियता कहिल्यै घटेन ।
हामी फरकफरक दिन फरफरक खेल खेल्थ्यौं । एकदिन शरणले माटोको भाडा बनायो । मैलै माटोकै अगेँनो बनाएँ । हामीले घरमा चाहिने सबै सामान जोड्यौं । खेल सुरु भयो । सरला बेहुली, म बेहुला हुनुपर्ने भो । सुरुसुरुमा त ऊ लजाई । सबैले बस्न कर गरेपछि उ रिसाउदै बसी । खुशीले गदगद भएँ ।
राजु किताब निकालेर मन्त्र पढ्न थाल्यो । हामी सबै एउटै पक्षका थियौं । राजुले एकछिन पछि बोल्यो, “अब बेहुलाले बेहुलीलाई सिन्दुर लगाइदिने ।”
अब लजाउने पालो मेरो थियो । सरला भने त्यति गम्भिर देखिइन । मैले अलिकति माटो ठिक पारे । लगाउन आटेको थिए । आँखामा झिलिक्क बत्ति बल्यो । म भुइँमा पछारिए । मधुरो वातावरणमा सरलाका बा देखा परे । आखा मिचेँ । रिसले चुर भएका रहेछन् बुढा त । मेरो मण्डपमा ठुलो बेइज्जत भएको थियो । बेहुलीपक्षका पनि कोही देखिएनन् । बाहुन भएको राजु तीन कान्लामाथि कट्टु तान्दै पछाडि नफर्कि कुद्दै थियो ।
थाहा नै नपाई मेरा आँखाबाट आँशु झर्न थालेछन् । सरलाले आफ्नो अनुहार निहुराइरही । उसका बा ले उसलाई घर हिड् भन्दै घिर्सान थाले । उसले ‘नाई जान्नँ’ जस्तो भाव देखाई। बा ले बुझेनन् । मैले कयौं चलचित्र हेरेको थिए- भिलेनले नायिकाले लग्दा हिरो रिसले चुर भएको । तर , म हिरो थिइनँ । न त उसका बा कुनै चलचित्रका भिलेन नै ।
सरला १५ बर्षकी हुँदी हो । म त्यस्तै १६ मा हिड्दै थिएँ । खेल्ने उमेर पनि सकिसकेको थियो । मेरो गाउँमा अन्तिम बर्ष थियो । गाउमा ८ कक्षासम्म मात्र पढाइ हुन्थ्यो । सर कक्षामा नपसेका बेला हत्तपत्त बाहिर निस्कन्थे । एकदिन गणित पढाउने सरले सरलासँग चलेको देखेका थिए । कन्सिरी रातो हुने गरि ताने । दुइदिन सम्म त ज्वरो नै आयो ।
उसले पनि मनपराउछे भन्ने भाव प्रकट हुन थालिसकेको थियो । झरीमा धेरै नहिड्न भन्थी । धेरै घाममा नडुल्न आग्रह गर्थी । सायद, मैले बुझेको प्रेम यही थियो कि ?
समयले हामीलाई छाड्दै गयो । हामीले समयलाई पछ्याइरह्यौ । बार्षिक परिक्षाफल प्रकाशित भयो । म कक्षा ९ मा पुगेँ । सरलाको परिक्षाफल रोकिएको थियो ।
चैते हावा शिरशिर चलिरहेको थियो । कुनै कुनै बेला भने हावाको ठुलो झोक्का चल्थ्यो । सम्झन्छु, यो नै हाम्रोे अन्तिम भेट थियो । गाउँको चौतारोको ढुङ्गामा बसेका थियौं । पहिला त सरला बस्नै मानेकी थिइनँ । पछि अनकनाउदै बसेकी थिई । चौताराभन्दा अलि पर लालीगुराँस ढकमक्क फुलेका थिएँ । मनै लोभ्याउने गरि । उनका कपालका केश्रा उडिरहेका थिए । बाटोमा आवतजावत गर्ने मान्छे कम थिए । मानिसहरु घरीघरी मात्र आउँदै थिए ।
उसले एक्कासी उठेर मेरो गालामा म्वाइ खाई ।
म तीन छक्क परेँ ।
मैले सोधे, “के गरेको हँ यस्तो ।”
उसले सहजै उत्तर दिई, “ माया गरेको मान्छेलाइ माया गर्यो भने माया अझ बढ्छ रे ।”
मैले अझ उत्साहित हुदै सोधेको थिए, “कस्ले भन्छ हँ यस्ता कुरा ? ”
उसले प्याट्ट हिर्काउदै भनी। “ केही कुरा यस्ता हुन्छन्, जुन कुरा कसैले सिकाउनु पर्दैन । आफै सिकिन्छ ।”
“ए त्यसो भए तिमी मलाइ प्रम गर्छौ ?
“अनि के त गर्छु नि !”
म उसको नजिक पुगेँ । उसलाई तानेर प्रेमले निधारमा चुमेँ ।
उ अचम्म मान्दै सोधी “ के गर्नु भएको ?”
“माया अलिकति कम भएको थियो । बढाएको नि !”
भोलीपल्ट गाँउ छाड्दै थिएँ । बिहानै बा र म हिड्यौं । झिसमीसे अँध्यारो थियो । दोबाटोमा पुग्नैलाग्दा अगाडिबाट सर्याकसुरुक्क आवज आयो । अँध्यारो भएकाले डराउनु स्वभाविक पनि हो ।नजिकै आएपछि थाहा भो । सरला रै’छे । बा पर पुगिसक्नु भएको थियो । मलाई रोउँ रोउँजस्तो लागेको थियो । रुन सकिनँ ।
उसले जानेबेलामा भनी, “सरलाहरुसँग चौरमा निस्केर धेरै नजिस्किने है ,सरले कन्सिरी तान्नुहुन्छ नि !”
मैले हाँस्दै जिब्रो टोकेँ ।
उसले यसरी आज्ञा दिएकी थिई कि मानौं ऊ मेरी शिक्षिका हो । र भोली गृहकार्य गरिनँ भने मलाई उसले सजाय दिने छे ।
उसलाई छाडेर दुई पाइला अघि बढाएँ । ऊ ठिङ्ग उभिएकी थिई । अलिकपर पुगेपछि आफै बोलाई ।
“आज सक्कली सिन्दुर ल्याएको छु, नहाल्दिने ? बा पनि त आउनुहुन्न ।”
म अवाक् भएँ र त्यहाँबाट पछाडि नफर्कि फटाफट हिडेँ ।
आँखाबाट अविरल रुपमा आँशु झर्न थाल्यो । मन कुडिएर आयो । वान्ता आउला आउला जस्तो भयो । फ्याल्स ब्याकमा गएर सबथोक दृश्य आएर रिङीन थाल्यो । एकछिन अघिसम्म तेज गतिमा चलेको दिमाग एक्कासी सुस्त भयो । भाग्य भनेको पनि घैला जस्तै हुदो रहेछ, खस्दैमा चर्किहाल्ने ।
ओछ्यानबाट उठेँ । ल्यापटप थन्क्याएँ । जिउ भारी भै’रह्यो । बेलुकाको ४ बजेको रहेछ । एकछिन बाहिर बजारतिर निस्केँ । सधाको भन्दा आज कोलाहल बढी छ । आउनेहरु आइरहेका छन् । जानेहरु गइरहेका छन् । चराहरु फर्किरहेका छन् । बाआमालाई सम्झेँ । आफ्नै गाउँ सम्झेँ। बेलुकीपख कोठा फर्केँ । ल्यापटप टिपेर जि-मेल लेखेँ-
“सरला म भोली गाँउ आउदैछु…………..!”